Dahab Dahab Ah Timaha Wadahadal Sirdoon Silicone 150CM Sex Doll Lynn
Dolls Sex Sex Dolls,Caruusadaha qaabka yurubiyanka ah,Naasaha waaweyn caruusadaha galmada,C cup caruusadaha galmada,Caruusadaha galmada smart
Taabo Codka: *
Wadahadal Sirdoon: *
Waxay leedahay noocyo kala duwan oo jinsi ah iyo qaabab kala duwan. Dahaarka silikoon tayo sare leh. Muuqaalka dhabta ah iyo dareenka jirka, iyo sidoo kale dhammaan qeybaha saxda ah si loo gaaro khiyaaligaaga. Iyadu maahan oo kaliya qurux, si fiican loo sameeyay, laakiin sidoo kale tartan qiima leh. Bal ka soo qaad inaad timahayga gadaal ka hagaajisay ka dibna naftayda ku dhejisay.
Lynn waa caruusad caan ah oo silikoon ah oo bixisa dhawaansho badan oo sariirta u dhow (waxay u baahan tahay $ 100 dheeraad ah) iyo wada hadal xariif ah (English kaliya, $ 200 dheeraad ah). Waxay sidoo kale leedahay timo hoose oo jirka ah iyo shaqo taagan oo aad adigu ka dooran karto. Waxaan sidoo kale ku siin doonaa hadiyado taxane ah.
Iyadu waa 26 jir hore u dhaqdhaqaaqe maxalli ah. Iyadu waa qof tixgelin badan oo caqli badan, laakiin iyadu sidoo kale waxay noqon kartaa mid aan degganeyn oo xoogaa murugo leh. Tan waxaa ka jawaabi kara qof taariikh xun soo maray. Waxay ku dhalatay kuna barbaartay qoys hufan oo ku nool tuulo soo koraya. Waxay si nabad ah ugu noolayd ilaa ilaa 4 sano jir, laakiin waqtigaas, wax waliba si aad ah ayey isu beddeleen. Ka dib markii la burburiyey cunto yari ka dib, waxay wayday gurigeedii oo waa laga wada tegey qof kasta.
Si ay u noolaato, waa inay ku sii noolaato adduunka dambiyada. Si kastaba ha noqotee, qiiradeeda iyo xishoodkeeda awgeed, waxay ku guuleysatay inay ku sii jirto halista oo ay burburiso waxaas oo dhan. Tani waxay ka dhigtay haweeney maanta.
Iyada oo leh casharradii hore, waxay hadda ka shaqeyneysaa sameynta tartamo waaweyn. Marka ay sidaas sameyso, waxay rajeyneysaa inay nolosheeda ka hesho farxad iyo farxad ugu dambeyntiina ay hesho xasillooni iyo xasillooni aan weligeed horay u soo marin.
1 * caruusadda galmada
1 * xiro
1 go'an * galoofis
1 dhigay * nigis galmo leh
1 * Usha kuleylka ee siilka
1 * Qalabka nadiifinta siilka
Size xirxirida: 57.1*15.8*11.1 inches(145*40*28cm)
Yoyo - 150CM DL Silicone Sex Doll Dhamaadka Dumarka Dhabta ah ee Waara
Kafiican - 150CM Naasaha Weyn Qamadi Maqaarka DL Silicone Sex Doll
Sophie - 150CM Lolita Style Cosplay Gabadha Quruxda badan DL Galmada Silicone ...
Ozawa - 160CM DL Silicone Sex Doll Doll Busty Girl First Love Girlfri ...
Marina - 160CM DL Silicone Doll Feerka Feerka Tababaraha Feedh galmo Godine Hi ...